Fitsapana COVID amin'ny seranam-piaramanidina haingana: Tanjon'i Eropa
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana Eoropeana » Fitsapana COVID amin'ny seranam-piaramanidina haingana: Tanjon'i Eropa
Airport • Vaovao Mafana Belzika • Vaovao Mafana Eoropeana • Vaovao Mafana • Vaovao • fanorenana • Tourism • Fitaterana • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Tsiambaratelo momba ny dia • Travel Wire News • Vaovao isan-karazany
Fitsapana COVID haingana amin'ny seranam-piaramanidina
Ny jiro maitso ho an'ny iray amin'ireo fangatahana henjana indrindra avy amin'ny sehatry ny fizahantany iray manontolo hiantohana ny fitsangatsanganana any Eropa dia tonga avy tany Bruxelles ihany. Ny seranana dia seranam-piaramanidina haingana Fitsapana COVID, ny valiny dia afaka mamelombelona ny dia sy ny toekarena.
Na dia amin'izao fotoana izao aza ny Vaomiera Eoropeana dia tsy nametraka fitsipika tena izy - nanambara tolo-kevitra matanjaka fotsiny - toa ity ny dingana voalohany amin'ny famerenana ny dia ary indrindra ny sidina ao anatin'ny faritr'i Schengen.
Misokatra hatrany ny fanontaniana hoe iza no tsy maintsy mandoa ny andrana an-tapitrisany isan'andro, fa mandritra izany fotoana izany ny EU dia nanambara ny fizarana vola mitentina 100 tapitrisa euro hampitaovana Firenena eoropeana miaraka amin'ny fanandramana ary nanokana 35.5 tapitrisa ho an'ny Vokovoko Mena hanampiana ny mpiasa amin'ny fiofanana ary hahafahan'ny ekipa fitsapana finday an'ny fikambanana hampitombo ny fahaizan'ny COVID-19 manerana an'i Eropa.
Ireo savony haingana, izay ahafahana manamarina raha misy mpandeha miabo amin'ny virus Sars-COVID ao anatin'ny 20 minitra, dia azo raisina ho fitaovana fanaraha-maso ny sisin-tany ho an'ireo mpandeha avy amin'ny firenena mpikambana. Ny Komisiona eropeana koa dia nangataka tamin'ny fomba mazava ny governemanta rehetra mba hampihatra ny "fifanekena" ny valim-panadinana ka izany fomba izany dia mandrisika ny fivezivezena sy ny fivezivezena eo amin'ny firenena sy ny fanarahana ny fifandraisana amin'ny sisintany.
Ho fanampin'izany, ny EU dia nampahafantatra fa hatramin'ny 28 Oktobra lasa teo, ny Ivon-toerana Eoropeana misahana ny fisorohana sy ny aretina ary ny EASA (European Aviation Security Agency) dia mamorona protokol fiarovana mahazatra ho an'ny fitaterana an'habakabaka, manan-kery ho an'ny kaontinanta iray manontolo ary manome izay ilaina maodely iraisana amin'ny fitsapana COVID seranam-piaramanidina haingana any amin'ny seranam-piaramanidina.
Mazava be ny filazan'ny EU tamin'ny fanambarana ofisialy ny filàny hampiasa maodely iraisana: "Ilaina ny fanekena ny valim-panadinana mba hanamorana ny fivezivezena, ny fitadiavana ary ny fikarakarana.
": Ny firenena mpikambana dia amporisihina mafy hanaiky ny valin'ny fitsapana antigen haingana izay mahafeno ny mason-tsivana voalaza ao amin'ny tolo-kevitra ary tanterahina any amin'ireo firenena mpikambana EU rehetra amin'ny alàlan'ny toeram-pitsapana miasa.
"Ny fanarahana ny tolo-kevitra dia afaka manampy amin'ny fivezivezena malalaka ho an'ny olona sy ny fiasan'ny tsena anatiny amin'ny fotoana voafetra ny fahafahany manao fitsapana."
Ny fangatahana avy amin'ny sehatry ny fizahan-tany ilaina amin'ny famerenana amin'ny laoniny dia ekena ihany amin'ny farany. Ny indostria, raha ny marina, dia nanamafy hatrany fa ny fampiharana ny fitsapana COVID seranam-piaramanidina haingana manerana ny kaontinanta dia hanome vahana ny fivezivezena eoropeanina miaraka amin'ny fihenan'ny fiatraikany amin'ny fandaniana. Mazava ho azy fa ny kaompaniam-pitaterana an'habakabaka no nanosika indrindra hanao fampiharana ity fepetra ity.